Miraha Sharciga Isgaarsiinta | JAMHURIYADDA
Home Dhaqaalaha Miraha Sharciga Isgaarsiinta
Waxaa La Soo Gaaray Waqtigii Shacabku Guran Lahaayeen Miraha Sharciga Isgaarsiinta – W. Q. Eng Cabdi Cashur Xasan
In shirkaduhu isku xirmaan (interconnection) maadaama ay tahay arrin waajib ah sida uu dhigayo sharciga isgaarsiinta. Waxaa shirkadaha waqti loo siinayaa inay ka heshiiyaan qiimaha iyo adeegyada iyo habka isku-xiranka, iyadoo haddii ay heshiin waayaan ay soo dhex geli doonto dawladda si waafaqsan Xeerka Isgaarsiinta dalka.
Dawladda Soomaaliyeed waxay qorsheyneysaa inay aad sare ugu qaado dakhliga ka soo gala adeegyada isgaarsiinta iyo teknolojiyada.
In la helo daryeel sugan oo ay helaan macaamiisha iyo isticmaalayaasha adeegyada isgaarsiinta dalka iyo hannaan lagu xalliyo cabashooyinka macaamiisha.
Rukhsadda lagu shaqeeyo (License to operate) oo billowga ah: Dhammaan shirkadaha isgaarsiinta waxaa laga doonayaa inay qaataan rukhsad maadaama wixii hadda ka horreeyay uusan jirin sharci. Rukhsadda ay qaadanayaan shirkadihii hore u jiray waxay aad uga jabnaan doontaa midda ay bixin doonaan shirkadaha cusub, sida uu dhigayo Sharciga Isgaarsiinta;
Rukhsad Sanadle ah (annual license fee);
Khidmadda Isticmaalka Hirarka (spectrum fees);
Khidmadda Isticmaalka Lambarka (Numbering fees) oo laga bixinayo lambar kasta oo taleefoon;
Khidmadda la saaro lacagaha taleefoonnada la isugu gudbiyo (mobile money);
Canshuurta la saaro hadalka (VAT);
Qaaraanka Sanduuqa Baahinta Isgaarsiinta (Universal Service Fees) oo ah khidmad shirkadaha laga qaado si adeegga isgaarsiinta iyo internetka loogu horumariyo;
Khidmadda Keenista Qalabka (Type Approval fees);
Khidmadaha la saaro wicitaannada caalamiga ah ee dalka soo gala (Incoming international traffic fees);
Khidmadaha horumarinta iyo cilmi-baarisyada qeybaha isgaarsiinta iyo Tiknolojiyadda (Fees for R&D).
Musawiradda: Internetka ayaanu ka soo amaahsanay
Previous articleBakhtinta Kalluumeysiga Shiinaha
Next articleFaallo Buugga “Asraarta”